घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? - Nepal Page Nepal Page
काठमाडौं ४ मंसिर । सुनको मूल्यमा आज गिरावट आएको छ । कोरोना भाइरसको खोपको सफलताका समाचार अन्तरराष्ट्रियरूपमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको प्रभाव सुनको मूल्यमा समेत परेको छ । सोही कारण आज स्थानीय बजारमा समेत पहेंलो धातुको मूल्य प्रतितोला रु ७०० ले ओरालो लागेको छ ।
भारतमा भन्दा नेपालमा डिजेल सस्तो, बढ्यो अवैध निकासी
काठमाडौं, १० मंसिर । भारतमा डिजेल महँगो भएसँगै नेपालबाट यसको अवैध निकासी भइरहेको छ ।विगत
चार महिनामा विदेशी वस्तुको आयातमा कमी, निर्यातमा भने वृद्धि
एकै दिन १ हजारले घट्यो सुन, कति छ आजको मूल्य ?
काठमाडौं १० मंसिर । स्थानीय बजारमा आज पनि सुनको भाउ ओरालो लागेको छ । कोरोना
नेप्से नयाँ उचाइमाः आज दोहोरो अङ्कको वृद्धि
काठमाडौँ, ९ मङ्सिर । धितोपत्र बजारमा कारोवार मापक नेप्से परिसूचकले आज नयाँ उचाइ कायम गरेको छ
साखः ग्रुप अफ कम्पनी पारिवारिक समूहले चलाएको नेपालकै चर्चित कम्पनी हो । साखः समूहले एक
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । स्थानीय बजारमासुनको मूल्यमा आज सामान्य वृद्धि भएको छ । नेपाल सुनचाँदी